सावधान ! नयाँ फोन बेच्न सामसङ र एप्पलले आफैं स्लो बनाइदिन्छन् ग्राहकको स्मार्टफोन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सावधान ! नयाँ फोन बेच्न सामसङ र एप्पलले आफैं स्लो बनाइदिन्छन् ग्राहकको स्मार्टफोन
डिसी नेपाल , ९ कार्तिक २०७५
एजेन्सी। एप्पल र सामसङजस्ता ठूला स्मार्टफोन कम्पनीहरु आफैंले ग्राहकको स्मार्टफोन स्लो बनाइदिने र ग्राहकलाई नयाँ फोन किन्न बाध्य पार्ने गरेको खुलेको छ । यी दुई कम्पनीले यस्तै व्यापारिक आचारसंहिता भन्दा बाहिरको काम गरेको प्रमाणित भएपछि कारवाहीमा परेका छन् । उनीहरुले सफ्टवेयर अपडेटबाट आफ्ना मोबाइल डिभाइसलाई स्लो बनाइदिने गरेको खुलेको हो । उनीहरुले ग्राहकलाई नयाँ फोन किन्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले यसरी फोन स्लो बनाइदिने गरेको खुलेको छ ।